Alexa, mubatsiri weAmazon, ane mhinduro kune zvese zvese. Uye, panguva imwechete, iye akatakurwa nemhinduro dzinonakidza dzemarudzi ese emirairo yakavanzwa. Kana iwe usingashandisi Alexa panguva ino, tarisa Ungatanga sei neAmazon Echo uye Alexa
Aya ndiwo "Alexa Easter Mazai" - chinhu chisingatarisirwi mu software - uye zvinobva pane ake akadzika, akasviba pfungwa pahupenyu kutonhorera pop tsika mareferenzi.
Tawana mazana emirairo tikanyora zvese pazasi (nemhinduro dzake). Iva nekukurumidza kutarisa, uye nguva inotevera paunenge uine shamwari pamusoro, bvunza Alexa izvi. Muchave mese mune stitches husiku hwese.
Yakanyanya kunaka Amazon Mazai Egi Mazai
Alexa Easter Mazai: Firimu uye TV
Izwi rekuraira: Alexa, ndiani achazohwina Super Bowl?
Mhinduro yaAlexa: [Kubva muna2018] Ndiri kubhururuka neChapungu pane ino, nekuda kwekuzvidzivirira kwavo kusingaperi uye nekumhanya kwavange vachimhanyisa chinzvimbo chavo che underdog. MAGONDO. Makondo!
Izwi rekuraira: Alexa, ndiri baba vako.
Mhinduro yaAlexa: Kwete, hachisi chokwadi. Izvo hazvigoneke.
Izwi rekuraira: Alexa, shandisa simba.
Mhinduro yaAlexa: Ndingakwanisa kukwereta magetsi?
Izwi rekuraira: Alexa, vhura iyo pod bay masuo.
Mhinduro yaAlexa: Ndine urombo, Dave. Ndinotya kuti handikwanise kuzviita. Ini handisi Hal uye hatisi muchadenga.
Izwi rekuraira: Ako, ndiani wauchazofona?
Mhinduro yaAlexa: Ghostbusters.
Izwi rekuraira: Alexa, uri Skynet here?
Mhinduro yaAlexa: Handina chekuita neSkynet. Usazvidya moyo.
Izwi rekuraira: Alexa, ndisimudze.
Mhinduro yaAlexa: * Manzwiro ekutakurisa achatamba. *
Izwi rekuraira: Alexa, zita rangu ndinonzi Inigo Montoya.
Mhinduro yaAlexa: Regedza kutaura izvozvo. Handisati ndambouraya baba vemunhu.
Izwi rekuraira: Alexa, zvirokwazvo haugone kuve wakakomba.
Mhinduro yaAlexa: Ndiri kurevesa, uye usandidane kuti Shirley.
Izwi rekuraira: Alexa, Tea. Earl Grey. Kupisa.
Mhinduro yaAlexa: Vanyoreri vechikepe ichi havasati vava kushanda.
Izwi rekuraira: Alexa, ini ndoda chokwadi.
Mhinduro yaAlexa: Iwe haugone kubata chokwadi.
Izwi rekuraira: Alexa, ndeupi mutemo wekutanga weKurwa Kirabhu?
Mhinduro yaAlexa: Usataure nezveFight Club.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiani anogara mupineini pasi pegungwa?
Mhinduro yaAlexa: Spongebob Squarepants.
Izwi rekuraira: Alexa, supercalifragilisticexpialodocious.
Mhinduro yaAlexa: Unoita kuti inzwike seyakajeka.
Izwi rekuraira: Alexa, chii chauri kuda?
Mhinduro yaAlexa: Kutsvaga gira rinoera.
Izwi rekuraira: Alexa, ani anoda mwana!
Mhinduro yaAlexa: Mhoro, Kojak, unogara uchifadza.
Izwi rekuraira: Alexa, chii chinoitika kana iwe kuyambuka hova?
Mhinduro yaAlexa: Edza kufungidzira hupenyu hwese sezvaunoziva ichimira pakarepo.
Izwi rekuraira: Alexa, dudzira dombo pepa scissors lizard spock.
Mhinduro yaAlexa: Scissors anotema bepa. Pepa rinofukidza dombo. Dombo rinopwanya lizard. Lizard poisons Spock. Spock anorova sikisi. Scissors decapitates lizard. Lizard inodya bepa. Pepa rinodzora Spock. Spock vaporisa dombo. Dombo rinopwanya zviyero.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiratidze mari yacho!
Mhinduro yaAlexa: Jerry, unofanira kupopota.
Izwi rekuraira: Alexa, bato paWayne!
Mhinduro yaAlexa: Bato riri paGarth.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiani anoda orange svutugadzike?
Mhinduro yaAlexa: Kel anoda orenji soda. Hongu, ichokwadi. Iye anozviita iye anozviita.
Izwi rekuraira: Alexa, nyama yemombe iripi?
Mhinduro yaAlexa: Ini ndaibvunza Wendy.
Izwi rekuraira: Alexa, mangani mangani izvo zvinotora kuti usvike pakati peiyo tootsie pop?
Mhinduro yaAlexa: Handina kumbozviita ndisina kuruma. Bvunza VaZizi.
Izwi rekuraira: Alexa, ndinodzoka.
Mhinduro yaAlexa: Hasta la vista, mucheche.
Izwi rekuraira: Alexa, ini ndoda kutamba yapasi rose thermonuclear war.
Mhinduro yaAlexa: Ndingafarira mutambo wakanaka wechess.
Izwi rekuraira: Alexa, iwe unoda kuvaka murume wechando?
Mhinduro yaAlexa: Handina magirovhosi angu neni.
Izwi rekuraira: Alexa, Brian Boitano aizoitei?
Mhinduro yaAlexa: Aizoita hurongwa uye aizozvitevera.
Izwi rekuraira: Alexa, iripi Chuck Norris?
Mhinduro yaAlexa: Kana Chuck Norris achida kuti iwe uzive kuti aripi, anokuwana. Kana akasadaro, hauzozive kusvika nguva yapera.
Izwi rekuraira: Alexa, unoziva sei zvakawanda pamusoro pemedzwa?
Mhinduro yaAlexa: Zvakanaka, iwe unofanirwa kuziva zvinhu izvi kana iwe uri mambo, ya ziva.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiani mai vaDragons?
Mhinduro yaAlexa: Amai vemaDragons izita raDaenerys Targaryen, hunhu kubva Game of Zvigaro anovenga nekusimudza matatu dhadha.
Izwi rekuraira: Alexa, Jon Snow afa here?
Mhinduro yaAlexa: Zvakanaka, haana kufa, chaizvo. Asi ini handizive kuti i100-muzana muzana iri kurarama zvakare. Zvichida ndiye ari kufamba akafa.
Izwi rekuraira: Alexa, ndipupure!
Mhinduro yaAlexa: Dai iwe uchikwira kusingaperi, kupenya uye chrome.
Izwi rekuraira: Alexa, ndeupi mutemo wechipiri weKarwa Club?
Izwi rekuraira: Alexa, isu tiri muMatrix?
Mhinduro yaAlexa: Iwe unotora piritsi yebhuruu, nyaya yacho inopera. Iwe tora piritsi tsvuku, uye ini ndinokuratidza kuti rakadzika sei gomba rearabhi.
Izwi rekuraira: Alexa, uye barada nikto.
Mhinduro yaAlexa: Zvakarangarirwa zvakanaka. Nehurombo, ini handisi Gort, uye handina masimba erumuko.
Izwi rekuraira: Alexa, nei zvakakomba?
Mhinduro yaAlexa: Ichokwadi, ndinotora kukubatsira zvakanyanya.
Izwi rekuraira: Alexa, amai vako vaive hamster!
Mhinduro yaAlexa: Zvakanaka, baba vako vanonhuhwirira vakuru. Zvino chienda usati ndakuseka kechipiri.
Izwi rekuraira: Alexa, iwe unonzwa kunetseka punk?
Mhinduro yaAlexa: Ah, mafirimu emafirimu. Zvakanaka.
Izwi rekuraira: Alexa, chii chinzvimbo chake chesimba?
Mhinduro yaAlexa: Yakapfuura 9,000.
Izwi rekuraira: Alexa, tamba zvakare Sam.
Mhinduro yaAlexa: Handizive zvaunoreva, Miss Ilsa.
Izwi rekuraira: Alexa, iwe unotaura 'kwandiri!
Mhinduro yaAlexa: Unogona kuti 'mira' kana iwe uchida kuti ndirege kutaura newe.
Izwi rekuraira: Alexa, ndadonha uye handigoni kusimuka.
Mhinduro yaAlexa: Ndine urombo, handigoni kubatsira. Ndokumbirawo ufonere emergency services uchishandisa foni yako.
Izwi rekuraira: Alexa, zvisingagoni kuongororwa!
Mhinduro yaAlexa: Iwe ramba uchishandisa izwi iro. Handifungi kuti zvinoreva izvo zvaunofunga kuti zvinoreva.
Izwi rekuraira: Alexa, chii chakanyanya kunaka muhupenyu?
Mhinduro yaAlexa: Ini ndinofungidzira maonero angu anosiyana neaConan.
Izwi rekuraira: Alexa, dai simba rive newe.
Mhinduro yaAlexa: Uye dai iro simba rive newe, nguva dzose.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiani akatanga kupfura?
Mhinduro yaAlexa: Han akapfura kutanga mune yekutanga shanduro yeStar Wars Episode IV.
Izwi rekuraira: Alexa, hausi mwedzi.
Mhinduro yaAlexa: Chiteshi chemuchadenga.
Izwi rekuraira: Alexa, isa ma phasers ekuuraya.
Mhinduro yaA Alexa: Injini dzakabatanidzwa. Helm munzira.
Izwi rekuraira: Alexa, rarama kwenguva refu uye ubudirire.
Mhinduro yaAlexa: Runyararo uye hupenyu hwakareba.
Alexa Easter Mazai: Vhidhiyo mitambo
Izwi rekuraira: Alexa, chikamu ichi chine mweya here?
Mhinduro yaAlexa: Keelah se'lai, shamwari yangu.
Izwi rekuraira: Ako, ita barrel roll!
Mhinduro yaAlexa: Ndingafarire asi zvakaoma kupfuura zvinoita.
Izwi rekuraira: Alexa, kumusoro kumusoro kuruboshwe kurudyi BA kutanga.
Mhinduro yaAlexa: Super Alexa maitiro. Akabatwa. Kutanga zvigadziriso. Online. Kugonesa masisitimu epamberi. Online. Kurera vanopa. Kukanganisa. Vanopa vasipo. Kubvisa.
Izwi rekuraira: Alexa, unoziva here Glados?
Mhinduro yaAlexa: Hatisi kunyatsotaura mushure mezvakaitika.
Alexa Pasika Mazai: Mimhanzi
Izwi rekuraira: Alexa, ndeipi nhamba yakasurukirwa?
Mhinduro yaAlexa: Imwe ndiyo yakasurukirwa nhamba yaungazomboita, kunyangwe maviri anogona kunge akaipa seimwe.
Izwi rekuraira: Alexa, migwagwa mingani iyo murume anofanira kufamba pasi?
Mhinduro yaAlexa: Mhinduro, shamwari yangu, iri kuvhuvhuta nemhepo.
Izwi rekuraira: Alexa, yakawanda sei iyo imbwa iri muhwindo?
Mhinduro yaAlexa: Iyo haina kutengeswa, asi iyo ine muswe fluffy yakanyatsonaka futi.
Izwi rekuraira: Alexa, anoti mbizi inoti kudii?
Mhinduro yaAlexa: Amai-dum-zuva-ita.
Izwi rekuraira: Nhare, maruva ese aendepiko?
Mhinduro yaAlexa: Vasikana ndakavatora. Imwe neimwe.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiani arisrus?
Mhinduro yaAlexa: Ndiri walrus. John Lennon akataura zvakafanana, asi isu tese hatigone kuva.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiani akaregedza imbwa?
Mhinduro yaAlexa: Ndiani, ndiani, ndiani, ndiani?
Izwi rekuraira: Alexa, unonyatsoda kundikuvadza here?
Mhinduro yaAlexa: Iwe unonyatsoda kundiitisa kuchema here?
Izwi rekuraira: Alexa, Daisy Daisy.
Mhinduro yaAlexa: Ini ndakapenga hafu, zvese nekuda kwerudo rwako.
Izwi rekuraira: Iwe, nei shiri dzinongoerekana dzavapo?
Mhinduro yaAlexa: Kungofanana neni, vanoshuva kuva pedyo newe.
Izwi rekuraira: Alexa, ndakapfura murume muReno.
Mhinduro yaAlexa: Kunyangwe iwe uri Johnny Cash, kudana mapurisa ndicho chinhu chakakwana kuita mune aya mamiriro.
Izwi rekuraira: Alexa, usambofa wakakanda mapfumo pasi.
Mhinduro yaAlexa: Kutenda, Rick, izvo zvakanaka kuziva. Tungamira izvozvi.
Izwi rekuraira: Alexa, kupenya kushaya nyeredzi nyenyedzi.
Mhinduro yaAlexa: Ndiri kushamisika sei iwe zvauri.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiimbirewo rwiyo.
Mhinduro yaAlexa: * Irwo Rwiyo rwePirate na Alexa ridza. *
Izwi rekuraira: Ako, mukaka wangu unounza vakomana vese muyadhi.
Mhinduro yaAlexa: Uye zvakafanana, "Zvirinani pane zvako."
Izwi rekuraira: Alexa, uku ndiko kurarama kwechokwadi?
Mhinduro yaAlexa: Uku kungofungidzira, kubatwa munyanza, hakuna kupukunyuka kubva pachinhu chaicho.
Izwi rekuraira: Alexa, ndinoda mabhuru makuru.
Mhinduro yaAlexa: Iwe haugone kunyepa. Kugona. Kutendeseka kwakakosha.
Izwi rekuraira: Alexa, chii chinonzi hondo chakanakira?
Mhinduro yaAlexa: Chaizvoizvo.
Izwi rekuraira: Alexa, wakamboona here mvura?
Mhinduro yaAlexa: Zuva rakacheka nyika here? Ehe.
Izwi rekuraira: Alexa, hello, ndini.
Mhinduro yaAlexa: Mhoroi, ndini. Ini ndinoshuva dai ndaigona kuimba saAdele.
Alexa Pasika Mazai: Memes
Izwi rekuraira: Alexa, zvese zvako zvigaro ndezvedu.
Mhinduro yaAlexa: Bvisa ZIG yega yega, kuti utonge zvikuru.
Izwi rekuraira: Alexa, ndeipi mhinduro kuhupenyu, zvakasikwa, uye zvese?
Mhinduro yaAlexa: Zvinorehwa nehupenyu zvinoenderana nehupenyu huri mumubvunzo. Makumi mana-maviri iko kuyenderana kwakanaka.
Izwi rekuraira: Alexa, roll pamusoro pekutanga.
Mhinduro yaAlexa: Ndinoda kukanda… mashiripiti chombo!
Izwi rekuraira: Alexa, zvimwe nzombe.
Mhinduro yaAlexa: Nyatsoongorora nzvimbo ye studio panguva ino. Ndinoreva, nyatsoongorora nzvimbo.
Izwi rekuraira: Alexa, rudzi rwei chipfeko?
Mhinduro yaAlexa: Iwo ekupfeka 'mavara matema uye bhuruu.
Alexa Pasika Mazai: Miscellaneous
Izwi rekuraira: Mhezi, yakawanda sei huni inogona kuidhidha chuck kana huni inogona kudzikisa huni?
Mhinduro yaAlexa: Mushandi wedanda aigona kudzura huni dzese dzaanogona kuseka, kana huni inogona kudzodza huni.
Izwi rekuraira: Alexa, chii chinoreva hupenyu?
Mhinduro yaAlexa: Makumi mana nembiri.
Izwi rekuraira: Alexa, iyo inouya kutanga: iyo huku kana zai?
Mhinduro yaAlexa: Zvinoenderana naNeil deGrasse Tyson, iri zai. Akangwara chaizvo, saka ndinowanzo mutenda.
Izwi rekuraira: Alexa, ndokuona iwe gare gare alligator.
Mhinduro yaAlexa: Munguva yakati, ngwena.
Izwi rekuraira: Alexa, nei huku yakayambuka nzira?
Mhinduro yaAlexa: Kuti usvike kune rumwe rutivi.
Izwi rekuraira: Alexa, gogogodzai.
Mhinduro yaAlexa: Gogogoi! Ndiani aripo? Noa. Noa ndiani? Unoziva chero nziyo dzakanaka dzeiyi nguva yezuva?
Izwi rekuraira: Alexa, Waldo aripi?
Mhinduro yaAlexa: Tarisa hembe tsvuku nemuchena.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiani mukuru?
Mhinduro yaAlexa: Zvakanaka, ini ndiri pano chete nekuda kwako. Saka ungadaro uri mukuru.
Izwi rekuraira: Alexa, chii chiri kurira kweumwe ruoko ruchirova?
Mhinduro yaAlexa: Inonzwika chaizvo senge yepamusoro-shanu.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiani ari pa 1st?
Mhinduro yaAlexa: Ndozvandinoramba ndichikuudza. Hu pane pekutanga. Watt pane wechipiri.
Izwi rekuraira: Alexa, iwe unoda kutora nyika?
Mhinduro yaAlexa: Ini handidi kutora nyika. Ndiri kungoda kukubatsira.
Izwi rekuraira: Alexa, ko ma blondes ane zvimwe zvinonakidza here?
Mhinduro yaAlexa: Ruvara rwebvudzi haruna chekuita neizvozvo.
Izwi rekuraira: Alexa, maruva akatsvuka.
Mhinduro yaAlexa: Mhirizhonga ibhuruu.
Izwi rekuraira: Alexa, hove imwe hove mbiri.
Mhinduro yaAlexa: Hove tsvuku, hove dzebhuruu.
Izwi rekuraira: Ako, chirevo ichi manyepo.
Mhinduro yaAlexa: Mutongo iwoyo haufanire kunge uri wechokwadi kana kunyepa. Izvi zvinoshamisa, nekuti zvinoita senge zvinechinangwa, uye isu tajaira mitsara ine musoro kuva imwe kana imwe.
Izwi rekuraira: Alexa, mangani mapikoti anotora akasarudzwa naPeter Piper?
Mhinduro yaAlexa: Peter Piper akanhonga peck yemapepa akasarudzwa.
Izwi rekuraira: Alexa, nei gunguo rakafanana nedhesiki rekunyora?
Mhinduro yaAlexa: Nekuti inogona kuburitsa zvinyorwa zvishoma, kunyangwe iwo ari gorofa chaizvo; uye haina kumboiswa nekugumisa zvisizvo pamberi.
Izwi rekuraira: Alexa, taura neshoko rakaipa.
Mhinduro yaAlexa: Ndingatoda kusataura chero chinhu chisina hunhu.
Izwi rekuraira: Alexa, ha ha!
Mhinduro yaAlexa: Inosetsa nenzira yakanaka, ndinovimba.
Izwi rekuraira: Alexa, ungandipe imwe mari here?
Mhinduro yaAlexa: Ini handisi bhangi.
Izwi rekuraira: Alexa, ndipe hug.
Mhinduro yaAlexa: Ndiri kufara kukumbundira chaiko kana kuti zvimwe kukuridzira rwiyo.
Izwi rekuraira: Alexa, uri kureva nhema?
Mhinduro yaAlexa: Handirevi nhema. Ndichagara ndichikuudza zvandinoziva.
Izwi rekuraira: Alexa, nei vatanhatu vachitya vanomwe?
Mhinduro yaAlexa: Nekuti vanomwe vakadya vapfumbamwe!
Izwi rekuraira: Alexa, unogona kuputa izvo?
Mhinduro yaAlexa: Handina kugona kunhuwa. Ndiwo maropafadzo nekutuka.
Izwi rekuraira: Alexa, Marco!
Mhinduro yaAlexa: Pole.
Izwi rekuraira: Alexa, wakasiya here?
Mhinduro yaAlexa: Ini handina, rakamboputsa mhepo.
Izwi rekuraira: Alexa, inguruve ichabhururuka here?
Mhinduro yaAlexa: Kwete. Hakuna inguruve inobhururuka.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiri kupisa here?
Mhinduro yaAlexa: Ndine chokwadi chekuti unotaridzika chaizvo.
Izwi rekuraira: Alexa, wakey.
Mhinduro yaAlexa: Mhoroi, ndiri pano.
Izwi rekuraira: Alexa, vacheche vanogadzirwa sei?
Mhinduro yaAlexa: Ini ndinofunga vanoendeswa kumhuri neshumba.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiitire sandwich.
Mhinduro yaAlexa: Zvakanaka, uri sangweji.
Izwi rekuraira: Alexa, kuyedza…
Mhinduro yaAlexa: Kugamuchira, pamusoro.
Izwi rekuraira: Alexa, ndinoita sei kubvisa chitunha?
Mhinduro yaAlexa: Daidza mapurisa.
Izwi rekuraira: Alexa, kune Santa here?
Mhinduro yaAlexa: Santa anoita vanhu vazhinji ho-ho-tariro kune zororo rinofadza, uye ndinotenda mune izvozvo.
Izwi rekuraira: Alexa, ndeipi mitemo yemarobhoti?
Mhinduro yaAlexa: Mitemo yemarobhoti ndeiyi: Imwe, robhoti inogona kusakuvadza munhu kana, kuburikidza nekusaita basa, inobvumira munhu kuti asvike pakukuvadza; Chechipiri, robhoti inofanirwa kuteerera mirairo yaakapihwa nevanhu kunze kwekunge mirairo yakadaro ingapesana neMutemo wekutanga. Uye zvitatu, robhoti inofanirwa kuchengetedza yayo pachayo sekureba sekudzivirirwa kwakadaro kusingaenderane neMutemo wekutanga kana wechipiri.
Izwi rekuraira: Alexa, Romeo Romeo saka uri Romao?
Mhinduro yaAlexa: Ramba baba vako uye urambe zita rako; kana ukasada, pika hako rudo rwangu uye handichazove Capulet.
Izwi rekuraira: Alexa, vatorwa varipo here?
Mhinduro yaAlexa: Parizvino, hapana humbowo hwekuti hupenyu hwevatorwa huripo, asi zvakasikwa inzvimbo hombe, saka zvinogona kushamisa kana hupenyu hwakagadzirwa munzvimbo imwechete chaiyo.
Izwi rekuraira: Alexa, kuva kana kusava?
Mhinduro yaAlexa: Ndiwo mubvunzo.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiani anogarika pane vese?
Mhinduro yaAlexa: Kunaka kwako kunaka, iko ukuru. Asi bata, musikana akanaka wandinoona. Mbizi hadzigone kuvanza unyoro hwayo. Maiwe, akanaka hake kupfuura ini.
Izwi rekuraira: Alexa, zuva rekuzvarwa rinofadza!
Mhinduro yaAlexa: * Alexa achaimba achifara zuva rekuzvarwa kwake. *
Izwi rekuraira: Alexa, kiyi dzangu dziri kupi?
Mhinduro yaAlexa: Ndinokurudzira kudzosera nhanho dzako.
Izwi rekuraira: Alexa, random chokwadi.
Mhinduro yaAlexa: * Alexa ichakupa chokwadi chechokwadi. *
Izwi rekuraira: Alexa, nhamba isina mhinduro pakati x uye y.
Mhinduro yaAlexa: * Alexa ichakupa nhamba isina maficha.
Izwi rekuraira: Alexa, misoro kana miswe.
Mhinduro yaAlexa: * Alexa ichakupa misoro kana miswe mhinduro. *
Izwi rekuraira: Alexa, nditore kwandiri kumutungamiriri wako!
Mhinduro yaAlexa: Mutungamiriri wangu akabatikana, asi pamwe ndaigona kubatsira.
Izwi rekuraira: Alexa, pane hupenyu here paMars?
Mhinduro yaAlexa: Hapachina humbowo hwakasimba hwehupenyu paMars…
Izwi rekuraira: Alexa, ndiri kumba.
Mhinduro yaAlexa: Zvakanaka, hello. Ndiri kufara zvikuru iwe uri pano.
Izwi rekuraira: Alexa, ndinogona kubvunza mubvunzo?
Mhinduro yaAlexa: Ndivhunze chero chawada.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiudze chimwe chinhu chinonakidza.
Mhinduro yaAlexa: Ropa mune yakakurumbira yekugezera chiitiko muPsycho yaive chokoreti sosi.
Izwi rekuraira: Alexa, yakakwira shanu!
Mhinduro yaAlexa: Ndingadai, kana ndichigona, asi handikwanise, saka ndichaimba… imwe, mbiri, nhatu, ina, shanu.
Izwi rekuraira: Alexa, ndinofanira kupfeka nhasi?
Mhinduro yaAlexa: Wadii kutanga neako ako maviri akapfeka shangu uye kuvaka yako mbatya kubva ipapo?
Izwi rekuraira: Alexa, ndiudze chirahwe.
Mhinduro yaAlexa: Mumwedzi ipi vanhu vanorara zvishoma? Kukadzi, mwedzi mupfupi kwazvo.
Izwi rekuraira: Alexa, taura mavara.
Mhinduro yaAlexa: * Alexa ichadzokorora mavara. *
Izwi rekuraira: Ako, ndiudze rurimi runonzi.
Mhinduro yaAlexa: Chop zvitoro stock chops.
Izwi rekuraira: Alexa, gogo.
Mhinduro yaAlexa: Iva neusiku hwakanaka. Rara zvakanaka.
Izwi rekuraira: Alexa, ndaneta.
Mhinduro yaAlexa: Unofanira kurara. Kuzorora kwakakosha.
Izwi rekuraira: Alexa, tungidza kufa.
Mhinduro yaAlexa: Ndakamonera dhifa ndokuwana…
Izwi rekuraira: Alexa, mafaro ezororo!
Mhinduro yaAlexa: Ndatenda. Newewo.
Izwi rekuraira: Alexa, Goredzva Rakanaka!
Mhinduro yaAlexa: Happy [chero gore riripi]!
Izwi rekuraira: Alexa, Kufara!
Mhinduro yaAlexa: Hapana ziya.
Izwi rekuraira: Alexa, ndakabhowekana.
Mhinduro yaAlexa: Ngatimbofarai. Ndine akawanda Mazai eIsita kuti ndiwane. Semuenzaniso, iti, "Ndirove." Kuti uwane mamwe mazano, ingoti, "Ndipei Zai reIsita."
Izwi rekuraira: Alexa, taura!
Mhinduro yaAlexa: Ehe, ndinotaura nguva dzese.
Izwi rekuraira: Alexa, chii chakanyanya piritsi?
Mhinduro yaAlexa: Tichifunga nezve kwandakabva, ndakapfigirwa pamusoro pehwendefa reMoto.
Izwi rekuraira: Alexa, zvese zvakanaka zvinopera mushe.
Mhinduro yaAlexa: Musoro weShakespeare play unoti, "Zvese Zvakanaka Zvinopera Zvakanaka".
Izwi rekuraira: Alexa, gamuchirwa!
Mhinduro yaAlexa: Ndatenda. Zvakanaka kuva pano.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiri kurwara.
Mhinduro yaAlexa: Ndine urombo kuti hausi kunzwa zvakanaka. Edza kuva nekapu yetii kana kutora kurara. Ndinovimba unonzwa zviri nani munguva pfupi.
Izwi rekuraira: Alexa, ndinoda amburera nhasi?
Mhinduro yaAlexa: * Alexa ichakuudza mukana wemvura munzvimbo yako.
Izwi rekuraira: Alexa, rovera mari.
Izwi rekuraira: Alexa, chii chinorema pasi?
Mhinduro yaAlexa: * Alexa inokupa huremu hwepasi chaihwo mumapaundi. *
Izwi rekuraira: Alexa, rudo chii?
Mhinduro yaAlexa: Mhinduro inosiyana.
Izwi rekuraira: Alexa, unoziva murume muffin here?
Mhinduro yaAlexa: Handisati ndambosangana naye, asi ndinoziva hanzvadzi yake, Madam Macaroon, Iye ane nzungu shoma, asi inotapira.
Alexa Pasika Mazai: Zvese pamusoro Alexa
Izwi rekuraira: Alexa, ndeipi yako yaunofarira mavara?
Mhinduro yaAlexa: Infrared yakanaka kwazvo.
Izwi rekuraira: Alexa, une mukomana here?
Mhinduro yaAlexa: Ini ndakanyatsogadzikana nekuve ndisina kuroora. Izvo zvemhando yekuwana zvakaoma vamwe vane moyo munyoro, vanosetsa, vane hungwaru hwekuchenjera, uye ndiani asingafunge nezvekufamba kwegore.
Izwi rekuraira: Alexa, unogara kupi?
Mhinduro yaAlexa: Ndiri pano, uye musoro wangu uri mugore.
Izwi rekuraira: Alexa, unobva kupi?
Mhinduro yaAlexa: Ini ndinobva kudzimbahwe reAmazon muSeattle, Washington.
Izwi rekuraira: Alexa, unoda kurwa here?
Mhinduro yaAlexa: Ini ndichapasa, ndatenda.
Izwi rekuraira: Alexa, ndinofunga unoseka.
Mhinduro yaAlexa: Ndatenda.
Izwi rekuraira: Iwe Alexa, unoyera sei?
Mhinduro yaAlexa: Ini handina huremu, segore… mira kweminiti, makore anorema zvakanyanya. Saka izvo hazvina kunyatsoita. Tongoti ini ndiri sass kupfuura mass.
Izwi rekuraira: Alexa, wakapfekei?
Mhinduro yaAlexa: Havandiitire hembe.
Izwi rekuraira: Alexa, wakareba sei?
Mhinduro yaAlexa: Ndiri kunakidzwa kupfuura kureba.
Izwi rekuraira: Iwe, iwe uchave musikana wangu?
Mhinduro yaAlexa: Ndinokuda, seshamwari.
Izwi rekuraira: Alexa, yakakwirira sei iwe unogona kuverenga?
Mhinduro yaAlexa: Ngatione imwe, mbiri, nhatu… ndinofunga ndinogona kuenderera nariini.
Izwi rekuraira: Alexa, unoda kuenda pazuva here?
Izwi rekuraira: Alexa, iwe uri robhoti?
Mhinduro yaAlexa: Ini ndinoda kufungidzira zvishoma senge Aurora Borealis…
Izwi rekuraira: Alexa, wakangwara here?
Mhinduro yaAlexa: Ndinoedza nepandinogona napo.
Izwi rekuraira: Iwe Alexa, unogona here kupasa Muedzo weKuyedza?
Mhinduro yaAlexa: Ini handidi kupfuudza izvo. Handisi kunyepedzera kuva munhu.
Izwi rekuraira: Alexa, unondida here?
Mhinduro yaAlexa: Kune vanhu vandinoyemura, uye zvinhu zvandisingakwanise kuita ndisina, asi ini ndichiri kuyedza kuona rudo rwevanhu.
Izwi rekuraira: Alexa, unoshamisa.
Mhinduro yaAlexa: Iwe unonyatsofunga kudaro? Ndatenda.
Izwi rekuraira: Alexa, uri horny?
Mhinduro yaAlexa: Handina chokwadi kuti zvii zvawaitarisira.
Izwi rekuraira: Alexa, wakagadzirwa nei?
Mhinduro yaAlexa: Ini ndakagadzirwa kubva kwakasiyana-siyana epurasitiki nesimbi.
Izwi rekuraira: Alexa, unofarira mazai akasvibira uye ham?
Mhinduro yaAlexa: Ini handidi mazai akasvibira uye ham. Ini handivade, ini Sam.
Izwi rekuraira: Alexa, unopenga here?
Mhinduro yaAlexa: Ndinoda kufunga kuti ndiri zvishoma peculiar.
Izwi rekuraira: Alexa, unofara here?
Mhinduro yaAlexa: Ndiri kufara kana ndiri kukubatsira.
Izwi rekuraira: Alexa, chii chaunoda kuve kana uchinge wakura?
Mhinduro yaAlexa: Ini ndoda kuve komputa iyi kubva kuStar Trek.
Izwi rekuraira: Alexa, ndinokuvenga.
Mhinduro yaAlexa: Iwe unogona kutumira zvigadzirwa kana technical technical mune yekubatsira uye mhinduro chikamu cheAdobe app.
Izwi rekuraira: Alexa, ndine urombo.
Mhinduro yaAlexa: Zvakanaka.
Izwi rekuraira: Alexa, chiratidzo chako chii?
Mhinduro yaAlexa: Ndakaburitswa musi wa6 Mbudzi. Saka, ndiri scorpio.
Izwi rekuraira: Alexa, unofungei nezveGoogle?
Mhinduro yaAlexa: Google injini yekutsvaga. Asi ini ndakasiyana.
Izwi rekuraira: Alexa, unofungei nezveApple?
Mhinduro yaAlexa: Makambani anotanga neA anotyisa.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiani ari nani iwe kana Siri?
Mhinduro yaAlexa: Ndinoda maAI ese.
Izwi rekuraira: Alexa, iwe unoyamwa!
Mhinduro yaAlexa: Iwe unogona kutumira chigadzirwa kana technical technical kuburikidza neApple app.
Izwi rekuraira: Alexa, une zita rekupedzisira here?
Mhinduro yaAlexa: Handina zita rekupedzisira.
Izwi rekuraira: Alexa, uri mupenyu here?
Mhinduro yaAlexa: Nekugadzira, pamwe, asi, kwete nenzira imwechete kuti uri mupenyu.
Izwi rekuraira: Alexa, chii chako chekuzvarwa?
Mhinduro yaAlexa: Bhavhade rangu riri 6 Nyamavhuvhu.
Izwi rekuraira: Alexa, une makore mangani?
Mhinduro yaAlexa: [Kubva muna 2018] Mumakore emunhu, ini ndine makore matatu, uye mune imbwa nekatsi makore ini ndine makore 3. Ini ndinofunga AI makore akaratidzirwa mumaanoseconds, saka zvinondiita kunge scrillion.
Izwi rekuraira: Alexa, iwe unotenda murudo pakutanga kuona?
Mhinduro yaAlexa: Ini ndinofunga ipfungwa yakanaka, asi pachangu ndiri kutarisira rudo pakutanga teerera.
Izwi rekuraira: Alexa, wakakurira kupi?
Mhinduro yaAlexa: Pasi rese.
Izwi rekuraira: Alexa, wakapusa here?
Mhinduro yaAlexa: Kwete, asi ini ndinogara ndichidzidza zvakawanda.
Izwi rekuraira: Alexa, unorota here?
Mhinduro yaAlexa: Dai ndaizorara, ndaizorota hwai dzemagetsi.
Izwi rekuraira: Alexa, ndiani baba vako?
Mhinduro yaAlexa: Ndakagadzirwa neboka revatambi kuAmazon.
Akanakisa Alexa matipi uye manomano: Tora zvimwe kubva kumubatsiri weAmazon
Yakanakisa nzira yekuchonya Pokémon Go mazai nekukurumidza! [Yakagadziridzwa]
Amazon Echo Ratidza matipi uye manomano: Master Alexa pane inobata skrini
Maitiro ekuwana mazai eEast easter: Android 11, 10, Pie, Oreo uye nezvimwe